DAAWO: Boqor Buurmadow oo ka hadlay khudbadiisa muranka dhalisay ee Muqdisho – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Boqor Buurmadow oo ka hadlay khudbadiisa muranka dhalisay ee Muqdisho
November 30, 2021 Xuseen 7
Boqor Cismaan Buurmadow oo shir jaraa’id ku qabtay magaaladda ayaa ka hadlay hadalladiisa muranka dhaliyay ee uu magaalada Muqdisho ka jeediyay, isagoo raalli-gelin ka bixiyay hadalkiisa oo ahaa in Al-Shabaab ay tahay Dowlad labaad oo ka dhisan Soomaaliya, ayna hoggaamiso beeshiisa (Dir).
Buur-madoow, wuxuu uurku qabay af baa xado! Soomaali waay wada ogsoontahay Iidoor in uu ku raaxeeysanayo waxa dil iyo Qarax Koofur ka dhaca, idinkoo is leh, aqoonsi bay idiin horseedi doontaba!
Waxaan mar daawaday laba Oday oo idaacad Hargeeysa laga leeyahay oo London ku daala daadihinaya, oo Qarax Muqdisho ka dhacay uu midkood uu u duceeyey dadkii wax ku noqday, oo uu kii kale yiri, Waar Malaha ducada inaga dhab maahan oo aay labadiiba Qosol niyadda ka soo go’aday Kursigii kala dhaceen!!!!
Niyadda dhabta ah ee Iidoorna wataa!!!!
Cadowga dhabta ee Hawiye iyo dadka Muqdisho guud ahaan waa FARMAAJO, waxba ha ku daalina odaygaan kaftamaaya iyo Alshabaab.
YAA DILAY IKRAAN ?
YAA KU FALAADA CASHUURTA MUQDISHO ?
YAA ISKU DEYEY DILKA SHARIIF IYO XASAN SHEEKH?
Waa FARMAAJO !
FARMAAJO DAAROOD MA AHOO ?
Raalligelin miyaa laga dalbaday ISIMKA?!
Waxa dadbadani sheegaan in UGUS ay Xamar canshuurto! Waxa kale oo aynu wada ognahay in Galmudug ay kooxdani maamusho inta badan marka laga reebo Caabud-Waaq & Balanbal, oo ay beesha Daarood degto. Ceel-buur, Ceel-dheer, Xeradheere & qaar kaloo badan oo Gal-Mudug ah waxaa in muddo ahba haystay UGUS.
Marka ay rabaanna waxa ay gaalaa baxaan Wisil, Bacaadweyne, Dhuusa-mareeb & nawaaxigeeda. Intaba waxaa deegaan u leh beesha Hawiye, ee hadda Buur-madow haysata. Intaa waxaa dheer, Hir-Shabeele, oo beeshani degto, waa sidaa iyo si ka daran. Shabeelada hoosena warkeedaba daa. Miyayna markaa nimanku idin xukumin? Isaaq & Daarood deegamadooda waa haystaane, maxay dhulkiinna UGUS u haysataa?
Sidaa daraadeed, odaygu hadduu gefay & haddii kaleba waxa uu hadalka ka waday nimanku iyaga ayaa idiin taliya ee si kale kama wadin sida aan filayo. Hadalka uunbaa meesha la maray. Haddaad ka gubanaysaan, maxaad hoosta ugu haystaan UGUS, oo ay idiin maamulaan?
Hawiyoow, Soomaaliyi idinka ayay idinka socon la’dahay ee waxba odayga ha xagxaganina. Maalinwalba siyaasiyiintuunnu waxa ay ku haysaa “ciidamaannu Xamar soo galaynaa, iyada oo dhulkiinnu BAYLAH yahay, sidee bay isu qabanaysaa?! Marka, ma idinka ayaa UGUS ah? Waar Soomaalidu ma rabto in ay runta istaabsiiso.
Gunaanadkii, inta badan dhulka uu Hawiyuhu sheegto & adeeradooda waxaa haysta oo maamula waa UGUS. Sidaas baad weliba ku rabtaan in MADAXWEYNE aad waddanka uga noqotaan. Caasiamadna ma istaahishaan, oo madaxweynena ma istaahishaan. Askar SANKA-DHUUDHIYAA & UGUS baa idin xukuma. Maxaad marka u sheeganaysaan odayga hadduu sheegay sida ay wax ula ekaadeen. Odayga XAAL siiya.
Waxaad tiraahdaa, Cadowga Dhabta ah ee Hawiye Waa Daarood! Waxaan ogahay, in aay in badan oo Hawiye ah sidaada oo kale oo aay beeshaada Habargidir ugu horreeyso in aay idinka daadegi la’yahay, sidee baay ku dhici kartaa in uu isagoon idanka Aar gudan Daaroodkii aad 91kii sidii la ogaa u xasuuqdeen, uu wixii aad ku sameeyseen u illaaway oo uu idiinla macaamilayaa?
Aniga ayaa runta kuu sheegayee, Daarood sida aay Amxaaro Itoobiya Tiir dhexaadka ugu tahay ayuu Soomaaliya Tiir dehxaad ugu yahay. Oo haddii uu sida hoose ee aay Hawiye iyo Iidoor u fekeraan uu u fekeri lahaana, Dal Soomaaliya la yiraahdo oo xur ahiba bariga Afrikaba kuma yaaleen!!
Ee sidooda oo Kale inta uu u fekero ayuu aargudan lahaa oo aay sidaasi ku baabi’i lahayd, Ummadda maanta soomaalida loo yaqaano ee dalka leh!
Soomaali waxey ku wada joogtaa dul-qaadka, sabirka,dhaqanka suuban iyo soo dhoweynta beelweynta Hawiye.
Ani nacayb gaar ah qofna uma qabo laakiin waxaan diidanahay isku-kor-noolaanshaha aa qasabka ku rabataan iyo haddii kale Soomaali waa kala tagida aa nagu handadeysiin !
Diversion Tactics-ka iyo Buurmadoow waa u jeednaa indhahana waa noo furanyihiin ee ogoow ama doorasho xalaal ah ama adaa is-yaqaan meeshaa aadeysiin.
HA BURBURTO HADAEY RABTO
Marka ugu horreeyso Doorasho xalaal ahi horta ma jirto meel aay ka dhacdo, Soomaali oo uu musuqmaasuq dhaqan u yahayna warkeeda daa. Haddii aan si kale u iraahdana, lama Sheegin illaa iyo Aadan Cadde Doorasho Soomaaliya ka dhacday oo aaysan Qaayli ka yeerin.
Midda aad tiri dulqaad Hawiye ayaa lagu wada joogaana, waa been oo Soomaali beri bay Muqdisho oo dhul Hawiye ah soo degtay, maalgeshatay oo aay Caasimad ka dhigatay. Taasina Soomaali dhaxalkeeda waay aragtay oo waxaay ka dhaxashay. Xasuuq, kufsi, barakicin iyo wixii aay Qaran iyo ummadiba 100 sano tabcayeen oo uu Hawiye kala wareegay!
Haddii lagu kala tagu sidii dhacday 91kii, waxaay u darantahay Ninka uu deegaankiisana 90% Shabaab haaysto, oo sidiisii xaafado kala xirxiran doono. Oo aay CEELMACAAN Deked u noqon Doonto, garoon Diyaaradeedna Cisileey. Madaxdiisana aay noqon doonaan. Muuse Suudi, C. Qeybdiid, cabdi Waal, Yuusuf Indho Cadde iwm.
Soomaali inteeda kale deegaamadeeda ayaay dhisatay, Dekedo iyo Garooma Diyaaradeedna waay leedahay. Allow yaa run uu sheego meesha aay maanta Soomaali Muqdisho ka joogto, khaasatan Daarood!
Tuug madow waxaa dhalay dhilo Majeertaynay ah, beentii majeedheenay ayuu wadaa.